भुक्तानीको अवधि के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki परिशोधन अवधि
भुक्तान अवधि के हो?
तपाईंलाई ऋण चाहिन्छ? अथवा तपाईं पहिले नै एक लामो चकित इच्छा पूरा गर्न ऋण लिनुभएको छ?
त्यसपछि तपाईंसँग निश्चित रूपमा निश्चित रकम छ परिशोधन अवधि पालन। यी कहिल्यै सम्झना हुँदैन। यस्तो समय सीमा बैंक द्वारा निर्धारित गरिएको छ।
एक निश्चित अवधि भित्र, तपाईंले यो ऋण वा ऋण फिर्ता तिर्नुपर्छ। धेरै मानिसहरूको लागि, यो एकदम राम्रो काम गर्दछ, किनकि तिनीहरूले पैसा तिर्न को लागि एकदम सही छोटो समय छान्नुहोस्।
तथापि, फरक फरक देखिन्छ, जब तपाइँ घर बनाउँदछ वा किन्नु हुन्छ र अन्तिम म्याद वर्ष हो। अहिल्यै छैन, यसले धेरै दश वर्ष लाग्न सक्छ कि एक हानिकारक ऋण तिर्न सक्छ। यो सबै म्यादलाइनहरू पालन गर्न अब महत्त्वपूर्ण छ। प्रायः यो किस्तरीय माध्यमबाट हुन्छ। यो धेरै सानो राख्न सकिन्छ, तर उपयोगी छन्। भुक्तान अवधि सेट गरिएको छ र तपाईंले अनुपालन गर्नुपर्छ। कसले, समस्या पाउन सक्छ। यदि तपाईं आफैलाई सूचिमा सूचित गर्नुहुन्छ र यदि यो काम गर्दछ भने तपाई निश्चित रूपमा जान सक्नुहुन्छ। दुर्भाग्यवश, यस्तो अवधिको समयमा धेरै हुन सक्छ।
तपाईंसँग दुर्घटना हुन सक्छ वा केवल सुरक्षित काम गुमाउन सक्छ। त्यसपछि यस्तो भुक्तानी अब पूरा गर्न सकिँदैन। यस अवस्थामा, यो बैंकलाई ऋण प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भन्दा बढी छ। बैंकले सही भन्नेछ यदि अन्तिम म्याद परिवर्तन गर्न ठीक छ वा सायद यसलाई निलम्बन गर्न निलम्बित नहुँदा सम्म यो राम्रो हुन्छ। संयोग, त्यस्ता मामलाको लागि बीमा बीमा पनि छन्, जुन हुन्छ जब तपाईं वित्तीय कठिनाइहरूमा पुग्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो बीमा हुनेछ। पहिले नै अनुप्रयोगको साथ तपाईंले सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि काम सुरक्षित छ र तपाईलाई थाहा छ जुन तपाईं चाहानुहुन्छ। यो काम एक फर्म अनुबंधमा आधारित हुनुपर्छ। यस तरिकामा, यो निश्चित रूपमा ऋणको साथ काम गर्छ, र तपाइँ भुक्तान अवधिको साथ पनि पालन गर्न सक्नुहुन्छ।
यो म्याद धेरैका लागि हो तर कहिलेकाहीं सम्मानित हुँदैन। यद्यपि तपाईं व्यक्तिगत ऋण लिनु भएको वा कसैबाट पैसा लिनुहुन्छ भने, तपाईंले भुक्तानी समय सीमा पालन गर्नुपर्दछ। यस अवस्थामा, सबै कुरा पनि लेखनमा निश्चित हुनुपर्छ। एक भुक्तान अवधि एक राम्रो कुरा हो, किनकी तपाईं सधैँ निश्चित हुन चाहनुहुन्छ कि तपाईं आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ। बैंक सामान्यतया समायोजन गर्दैछ र यस म्यादलाई काम गर्दछ ताकि यो पनि पहुँचयोग्य हो।
त्यसैले तपाईं राम्रो ऋण लिन सक्नुहुन्छ र छिटो जान्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ अन्तिम म्याचहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो मामला होइन भने, तपाईले यो क्रेडिट बरु जोगाउनु पर्छ। तपाईंलाई यो समयमा निश्चित छैन कि यो सुनिश्चित गर्न हुनेछ।
साथै केहि पैसा प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुहोस् र बचत गर्नुहोस्। यदि समस्या छ भने तपाई यो पैसा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। किस्त भुक्तानीहरू सँधै भुक्तानी गर्नुपर्छ, अन्यथा उनीहरूलाई पनि सम्झन सकिन्छ। त्यसैले तपाईलाई निश्चित गर्न तपाइँ सबै मापदण्डहरू पूरा गर्नुहुन्छ। तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यदि त्यस्तो ऋणको लायक छ।
कुनैपनि अवस्थामा, तपाईं अनुबंधको साथ रहनु पर्छ। तपाईंले केही गर्न मौका छोड्नुपर्छ र सँधै सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि पक्कै पनि केही पनि गलत हुनेछैन र तपाईं राम्रो अन्तस्करण राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईं ऋण तिर्न र भुक्तान अवधिको अनुपालन गर्न सक्षम हुनेछ। भुक्तानीको अवधि तोकिएको छ र तपाईले सधै मिलेर तपाईलाई भेट्नुपर्दछ।